Sun, Jun 24, 2018 | 13:16:24 NST
चट्याङले जुम्लामा टेलिफोन अवरुद्ध
जुम्ला, जेठ ३ – टेलिफोनको रिपिटर टावरमा चट्याङ्गले क्षति पुर्‍याएपछि जुम्लामा झण्डै एक हप्तायता टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । जुम्लाको माईथाप्लामा रहेका रिपिटर टावरमा गएको शनिवार चट्याङ्ग परेपछि नेपाल टेलिकमद्वारा वितरण ल्याण्डलाईन, तथा मोबाईल फोन सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
सबै जिल्लामा प्राबिधिक सेवा विस्तार
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, जेठ ३ – प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभीटीले प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्न यस वर्षदेखि सबै जिल्लामा एनेक्स कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । सिटिइभीटीले हालसम्म ४४ जिल्लाको ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा र चार नीजि विद्यालय गरी ४८ वटा विद्यालयमा संचालन गर्दै आएको एनेक्स कार्यक्रमलाई अब देशभर विस्तार गरिएको सदस्य सचिव जयबहादुर टण्डनले बताउनुभयो ।
आउँदै छ फेसबुकको आफ्नै एप्स् स्टोर
बैशाख २९ – फेसबुकले आफ्नै एप्लिकेसन स्टोर निर्माणको घोषणा गरेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आफ्नै एप्लिकेसन स्टोर निर्माण गर्न लागेको फेसबुकले बताएको छ ।
चन्द्रमा पृथ्वीको नजिकै आउने
काठमाडौं, बैशाख २४ - पूर्णिमाको राती चन्द्रमा पूर्ण आकारमा देखिने भएपनि आइतवार राती चन्द्रमा अरु पूर्णिमाको रातको तुलनामा चम्किलो देखिनेछ । पृथ्वीको नजिक आउने भएकाले तुलनात्मक रुपमा चन्द्रमा ठूलो पनि देखिनेछ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका अनुसार आइतवार चन्द्रमा ३० प्रतिशत बढी चम्किलो र १४ प्रतिशत ठूलो देखिने छ ।
सामसुङको नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस थ्रि सार्वजनिक
बैशाख २२ – सामसुङले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस थ्रि सार्वजनिक गरेको छ । यो फोनमा ४.८ इन्चको स्क्रिन छ जुन ४.३ इन्चको स्क्रिन भएको पछिल्लो मोडल ग्यालेक्सी एस टु भन्दा अझ उत्कृष्ट छ ।
आज सूचना प्रबिधि दिवश
काठमाडौ, बैशाख २०– चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश बुधवार बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकास र विस्तारलाई सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यो दिवश मनाउन थालिएको हो ।
नेताहरु कम्प्युटर सिक्दै
रमेश ऐडी/हुम्ला, बैशाख १९ – हुम्लामा तीन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आधारभुत कम्प्युटर तालिम दिइएको छ । अधिकार तथा समावेशीकरण कोष (आरडीआईएफ) को सहयोगमा हिमालय कन्जरभेसन एण्ड डेभलपमेन्ट एशोसिएसनले एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जिल्ला स्तरिय नेताहरुलाई तीन महिने कम्प्युटर तालिम दिएको हो ।
विद्यालयको सबै जानकारी टेलिफोन मार्फत
प्रकाश पन्त/उज्यालो । सुर्खेत, बैशाख १८ - जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले आफनो गतिविधीबारे टेलिफोनबाटै जानकारी दिने उदेश्यले सुचना वोर्ड सेवा संचालनमा ल्याएको जनाएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले १६१८०८३५२२४०८ मा फोन गरेपछि शिक्षा कार्यालयका सवै गतिविधी बारे थाहा पाउँन सकिने बताउनुभयो ।
ग्रामिण भेगमा सौर्य उर्जाको प्रयोग बढ्दै
नवलपरासी, बैशाख १५ - नवलपरासीको ग्रामीण भेगमा सौर्य उर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बिद्युत नपुगेका ग्रामीण भेगमा सौर्य उर्जाबाट बल्ने टुकीको प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढेको हो । जिल्लाका कोटथर, डाँडाँझेरी, भारतीपुर, जौबारी, नरम, रकुवा, डेढगाँउ, अर्खला, रुचाङ्ग, राकाचुली, रतनपुर, हुप्सेकोट र धौबादी लगायत गाबिसमा सौर्य उर्जाको प्रयोग बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले हिमश्रृङ्खला नपग्लिएको बैज्ञानिकहरुको भनाई
बैशाख ४ – वैज्ञानिकहरुले संसारकै ठूलो हिमालय श्रृँखला पग्लिएको नभएर फैलिँदै गएको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमालय श्रृँखला पग्लिएको भनाई आइरहँदा वैज्ञानिकहरुको टोलीले हिमालय श्रृँखला पग्लिएको भन्दा पनि फैलिँदै गएको बताएको छ ।
विकिलिक्स संस्थापक असान्जले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने
बैशाख २ – विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन । असान्जले रसियाको सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन रसिया टुडे नेटवर्क मार्फत आगामी हप्ता देखि प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘द वर्ल्ड टुमारो’ नामक कार्यक्रमको तयारी पुरा गरेको विकिलिक्सको ट्वीटरमा राखिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
चीनमा ४२ वेबसाइटमाथि कारबाही
बैशाख १ – चीन सरकारले ४२ वटा वेबसाइटमाथि कारबाही गरेको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अधिकारीहरुले विभिन्न ४२ वेबसाइट बन्द गरिदिएका छन् र इन्टरनेटबाट दुई लाख प्रतिक्रियाहरु हटाइएका छन् ।
ब्लगिङको ब्यापक संसार
रुपा गौतम/ उज्यालो । काठमाडौं, चैत ३० – घटना चाहे नौलो होस् वा सामान्य । सेन्ट जेभियर्स कलेजमा समाजसेवामा स्नातक गरिरहेका सुरेन्द्र कोइराला ‘ह्या जे सुकै होस्’ भन्दै चुपचाप हिड्नु हुन्न । उहाँको दिमागमा एउटै कुरा आउँछ, ‘यो कुरालाई कसरी लेख्ने ।’
सन् २०१४ सम्ममा विन्डोज एक्सपी ‘बन्द’
काठमाडौं, चैत २९ – तपाईँ अझैपनि विन्डोज एक्सपी र अफिस २००३ नै चलाउनुहुन्छ भने अब अपरेटिङ सिस्टम परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ । माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले विन्डोज एक्सपी र अफिस २००३ को दुई वर्षे उल्टो दिनगन्ती सुरु भएको जनाएको छ ।
घरमै बसेर डलर
रुपा गौतम उज्यालो । काठमाडौं, चैत २८ – काठमाडौंका सम्राट श्रेष्ठलाई स्कुले जीवनदेखि नै कम्प्युटर प्रविधिमा रुचि थियो । आइए पढ्दै गरेका उहाँलाई पढाइमा भने त्यति रुचि भएन । कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान बटुल्ने सानैदेखिको शोखले उहाँलाई घरमै बसेर बिदेशी कम्पनीका काम गर्ने हैसियतमा पुर्‍यायो । यानेकी उहाँले आउटसोर्सिङको काम सुरु गर्नुभयो । यानकी घरैमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि गरिने काम ।
चीनका वेबसाइटमा ह्याकरको हमला
चैत २४ – ‘प्रिय चिन सरकार । तपाईँ सधैँ अपराजित हुन सक्नुहुन्न । आज तपाईँका वेबसाइट ह्याक भए, भोलि तपाईँको सरकार गिर्न सक्छ ।’ यो सन्देश हो एनोनिमस ह्याकर ग्रुप नामक ह्याकर समूहको । ह्याकरको एक समूहले चीनका झण्डै ५ सय वेबसाइट ह्याक गरेको दावी गरेको छ । केही सरकारी वेबसाइट, एजेन्सी तथा व्यापारिक समूहका वेबसाइट पनि ह्याकर समूहको आक्रमणको शिकार भएको बिबिसीले जनाएको छ । ह्याकरले ह्याक भएका बेबसाइटमा जारी गरेको सूचना अनुसार चिनियाँ सरकारले नागरिकप्रति राखेको कडा नियन्त्रणको बिरोधमा ...
१० कक्षा पास भएपछि ल्यापटप
चैत २४ –भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले यसबर्ष १० कक्षा पास भएका र १२ कक्षा सम्म पढ्दै गरेका ४७ लाख विद्यार्थीलाई ट्याबलेट पीसी र ल्यापटप दिने भएको छ । त्यसका लागि साँढे ४ खर्ब रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
याहुले दुई हजार कर्मचारी कटौती गर्ने
चैत २३ – ईन्टरनेट कम्पनी याहुले २ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको याहुले कम्पनीलाई सानो, छरितो र बढी नाफा आर्जन गर्ने बनाउन १४ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न लागिएको जनाएको हो ।
याहू बिरुद्ध उत्रियो फेसबुक
चैत २२ – इन्टरनेट सर्च इन्जिन याहूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक विरुद्ध स्वाम्त्वि अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दायर गरेको एक महिना नबित्दै फेसबुकले याहू बिरुद्ध सोही प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको छ । अमेरिकाको सान्फ्रान्सिकोको एक संघीय अदालतमा मंगलबार दायर मुद्दामा फेसबुकले याहूबिरुद्ध आफ्ना विभिन्न उत्पादनमा स्वाम्त्वि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
किताबको सट्टा आइप्याड
चैत २१ – चीनका विद्यालयहरुमा किताबको सट्टा आईप्याडको प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ । विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पठनपाठनको प्रयोजनका लागि आईप्याड दिने तयारी गरेका हुन् ।
अन्तरिक्ष विज्ञान सम्मेलन सुरु
काठमाडौँ, चैत २० - अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञानसँग सम्बन्धित नविनतम् खोजको जानकारी गराउने उद्देश्यले सोमवारदेखि ‘दशौँ विद्यालयस्तरीय अन्तरिक्ष विज्ञान सम्मेलन’ सुरु भएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिद्वारा आयोजितसम्मेलनको उद्घाटन गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कल्पना धमलाले विश्वका नविनतम् वैज्ञानिक क्रियाकलापलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
सुरु भयो मोबाइल एक्सपो
काठमाडौं, चैत १६ – काठमाडौंमा बिहीबारदेखि मोबाइल एक्सपो सुरु भएको छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले मोबाइल प्रयोग तथा प्रविधिबारे जानकारी दिन मेला आयोजना गरेको जनाएको छ ।
फेसबुकमा ‘दुश्मनको लिष्ट’
चैत १४ – सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, अर्थात मित्रता । फेसबुकले तपाईँका धेरै बिछोडिएका साथी भेटाउन सहयोग गरेको होला । यही फेसबुकमा दुश्मनलाई पनि लिस्ट बनाउने सुविधा छ भन्दा नपत्याउनुहोला तर अचम्म मान्नुपर्दैन ।
आउँदैछ विन्डोजको नयाँ भर्सन
चाहना लामिछाने/ उज्यालो । काठमाडौं, चैत १२ – तपाईँ कुन अपरेटिङ सिस्टम चलाउनुहुन्छ ? धेरैको उत्तर हुन्छ – ‘माइक्रोसफ्ट विन्डोज् ।’ अनि कुन भर्जन नी ? ‘विन्डोज ७ ।’ सुरुदेखि नै विन्डोज् एक्सपी चलाउनेहरु त्यतै भुलिरहेका होलान् ।
ह्याप्पी बर्थ डे ट्वीटर !
काठमाडौं, चैत ८ – सन् २००६ को मार्च २१ का दिन ज्याक डोर्सेले पहिलो ट्वीट गरेका थिए । प्रसंग हो लोकप्रिय माइक्रो ब्लगिङ सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरको जन्मदिनको ।
चारदिनदेखि टेलिफोन अवरुद्ध
बिमल बिष्ट/ उज्यालो । डोटी, चैत ७ – चार दिनदेखि सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीमा टेलिफोन लाईन अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल टेलिकमको डोटीमा रहेको सिलगढीमा रहेको रिपिटर टावरमा आएको खराबिका कारण टेलिफोन लाईन अवरुद्ध भएको हो ।
याहूद्वारा फेसबुक बिरुद्ध मुद्दा दायर
फागुन ३० – आफ्नो वौद्धिक सम्पत्ति तथा स्वामित्व अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै इन्टरनेट सर्च इन्जिन याहूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । फेसबुकले आफ्ना १० भन्दा बढी उत्पादनको स्वामित्व अधिकार उल्लंघन गरेको याहूले आरोप लगाएको छ ।
खुमलटारमा नविकरणीय उर्जा प्रदर्शनी हुने
काठमाडौं, फागुन २९ – वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धनका लागि नेपालमै पहिलोपटक नविकरणीय उर्जा प्रदर्शनी हुने भएको छ । उर्जा प्रदर्शनी आयोजक समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत १ र २ गते प्रदर्शनी हुने जनाएको हो ।
ओजोन तह बिनास भैरहेको तथ्य पत्ता लगाउने वैज्ञानिक रोलेण्डको निधन
फागुन २९ – ओजोन तहको बिनास भैरहेको कुरा पत्ता लगाउने अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलेण्डको निधन भएको छ । रसायनशास्त्री शेरवुडले पृथ्वीको ओजोन तह क्षतविक्षत भएको र सूर्यका पराबैजनी किरण पृथ्वीसम्म आईरहेको पत्ता लगाउने शेरवुडले अनुसन्धानको २० वर्षपछि सन् १९९५ मा नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो ।
फेसबुकमा सौता भेटिएपछि....
फागुन २८ – श्रीमानले सुटुक्क अर्कै महिलासँग विवाह गरेको फेसबुकमा थाहा पाउँदा श्रीमतीलाई कति पीडा होला ? आफुलाई थाहै नदिई श्रीमानले सुटुक्क अर्को बिहे गरेको एक महिलाले फेसबुकबाटै थाहा पाएकी छिन् ।
एप्पलको ‘आइप्याड थ्री’ सार्वजनिक
फागुन २५ – एप्पलले फोर जी सपोर्ट गर्ने नयाँ आइप्याड थ्री सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार अमेरिकाको सान्फ्रान्सिकोमा एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले आइप्याड थ्रि सार्वजनिक गरेका थिए ।
६६ प्रतिशत मानिसमा नोमोफोबिया
फागुन २४ – तपाईँ आफ्नो मोबाइल फोनप्रति कत्तिको आशक्त हुनुहुन्छ ? कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ बाहिर निस्कँदा मोबाइल घरमै बिर्सनुभयो । मोबाइल फोनबाट सम्पर्क बाहिर रहनुपर्दा कत्तिको चिन्ता हुन्छ ?
गुगलको नयाँ प्राइभेसी पोलिसी लागू
फागुन १८ – ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी गुगलले गोपनियता सम्बन्धि नयाँ नीति लागू गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार गुगलको कुनै पनि सेवामा साईन ईन या रजिष्टर गर्दा दिईने जानकारी यु ट्युब, जीमेल, ब्लग लगायत अरु गुगल अन्तर्गतका सेवालाई पनि प्रदान गरिनेछ ।
नक्कली फेसबुक !
काठमाडौं, फागुन १७ – होम पेज हेर्दा फेसबुक जस्तै छ तर नझुक्किनु होला यो फेसबुककको कपीक्याट मात्र हो । ब्राउजरमा हाम्रोबुक डट कम हान्नुभयो भने झण्डै फेसबुककै झल्को दिने गरि एउटा साइट खुल्छ ।
आउँदैछ ४१ मेगापिक्सेल क्यामेरा सहितको नोकिया फोन
फागुन १६ – विश्वकै चर्चित मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनी नोकियाले आगामी मे महिना भित्र ४१ मेगापिक्सेल क्यामेरा भएको मोबाइल सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । स्पेनको बार्सिलोनामा जारी विश्व मोबाइल सम्मेलन (मोबाइल वर्ल्ड कँग्रेस) मा नोकियाले तीन महिना भित्र ‘नोकिया ८०८ प्योर ब्ल्यू’ नामक मोबाइल बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षर नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने
लमजुङ, फागुन ११ – सरकारले साईवर अपराध नियन्त्रणका लागि लागु गरेको विद्युतीय हस्ताक्षर नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । साईवर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर नीति लागु गरिएको एक महिनापछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय छलफल चलाएको हो ।
लोपोन्मुख भाषा संरक्षणमा फेसबुक र युट्यूब
फागुन ७ – संसारमा लोप हुन लागेका विभिन्न भाषाहरुको फेसबुक र यूट्यूबको सहाराले संरक्षणमा टेवा पुगेको भाषा विज्ञहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा इलेक्ट्रोटेक मेला
काठमाडौं, फागुन ६ – विद्युत्तीय सामानहरुको प्रदर्शनी छैटौं निक इलेक्ट्रोटेक काठमाडौंमा शुरु भएको छ । भृकुटीमण्डपमा शनिबारदेखि शुरु प्रदर्शनी पाँच दिनसम्म चल्नेछ ।
राजेश हमाल कलर्स फाइटरका ब्राण्ड एम्ब्यासडर
काठमाडौं, फागुन ५ – कलर्स मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता टेलिटकले कलर्स फाइटर सिरिजका लागि नायक राजेश हमाललाई ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको छ ।
औद्योगिक ईन्जिनियरिङ एक्स्पो फागुन ५ देखि
काठमाडौं, फागुन ३ – यही फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म राजधानीमा दोस्रो राष्ट्रिय औद्योगिक ईन्जिनियरिङ एक्स्पो आयोजना हुने भएको छ । तीन दिनसम्म काठमाडौंको थापाथली क्याम्पसमा हुने एक्स्पोमा विभिन्न औद्योगिक सामाग्रीहरुको प्रर्दशनीका साथै सो सम्बन्धी कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने छ ।